Ondense Manuel Alfonso Ortells, ebe nchekwa nke Mauthausen | Njem zuru oke
Ihe eji eme njem
Ondense Manuel Alfonso Ortells, ebe nchekwa nke Mauthausen
Ezigbo Castellón | | Castellon
Ondense Manuel Alfonso Ortells bi na Bordeaux ugbu a.
Ondense Manuel Alfonso Ortells bụ otu n’ime ihe karịrị puku ndị Spen iri isii a kpọgara n’ogige ịta ahụhụ na ole na ole fọdụrụ taa ịkọ maka ya. Manuel Alfonso Ortells bụ onye na-ese foto. Ọ zọpụtara ndụ ya ịga ọrụ n'ọfịs maka iwu nke ubi ahụ wee mee ihe osise na-akpali agụụ mmekọahụ n'ọnọdụ mgbanwe nke nri. Na 94, o bi na Bordeaux. N’ebe ahụ ka ọ na-edebe akụ ya: otu folda jupụtara na eserese ejiri akwụkwọ nke atụmatụ nke ubi ahụ mee. Ọ laghachighị Spen ọzọ.
Manuel Alfonso Ortells mụrụ na 1918, na dị ka akụkọ nke El País bipụtaraSite na mkparịta ụka mbụ dị na ekwentị, onye a na-anaghị amụ ihe na-enye echiche maka nwoke enweghị izu ike na-achọ ịkọ ahụmahụ ya n'ogige ndị Nazi. Ugbu a n'oche nkwagharị, nwere mmụọ dị mma ọbụna mgbe ị na-echeta ihe ndị kasị dị mwute. Ọ na-emesapụ aka, na-akpa ọchị, na-atụ ụjọ, dị ka e nyefere ya n'akwụkwọ autobiographical Site na Barcelona na Mauthausen. Afọ iri nke ndụ m. O dere ya na 1984, dị ka ọ na-ekwu, site na ncheta na ọ na-esiri ya ike ịgụ ahụmahụ nke ndị a chụpụrụ. Tupu ya achọta onye mbipụta akwụkwọ, o jiri aka ya mepụta mkpụrụ akwụkwọ iri isii, jiri photocopi, maka ụmụ ya, ndị enyi ya na ebe ndebe ihe ochie; ha nile di iche.
Kemgbe ọ bụ nwata, ọ na-anụ ọkụ n'obi banyere ihe oyiyi na akwụkwọ akụkọ ahụ - TBO, ka ọ were mụọ ihe osise na seramiiki ụlọ akwụkwọ nke Onda (Castellón). Na ntiwapụ nke Agha Obodo, ọ wepụtara onwe ya maka akụkọ ifo Durruti Column, ọ nọ n'ihu Aragon; Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, a họpụtara ya sajenti na n'ọgụ a lụrụ ya egbe egbe n'akụkụ nso. O jisiri ike gbaga France, ebe ọ ga-azọ ụkwụ na mpaghara French dị iche iche wee debanye aha na ụlọ ọrụ ndị ọrụ mba ofesi. N'ime otu n'ime ha, na Septfonts, o jisiri ike zoo zoro ezo, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ, pensụl, mpempe akwụkwọ eserese na akwụkwọ ederede iji zigara nne ya akwụkwọ ozi. Ndị ahụ bụ akụ ya kacha wee nwee ike ịchọta.
Ogbunigwe ahụ siri ike, Paris dara na June 1940, Pétain bịanyere aka na Germany na ngwa agha. Ndị agha German jidere Ortell na St. Dié (Vosges) wee zigara ya na Stalag XI B, ebe o sere pensịl nke foto nne ya, nke ahụ o jisiri ike zoo n’ogige Mauthausen, na-eleghara anya iji mara ndị Nazi nke ọ na-ejizi nganga egosi n’ụlọ ya.
“Mgbe anyị rutere n'ụgbọ okporo ígwè, e nwere ọtụtụ n'ime anyị, ihe dị ka 800, ma ha amaghị ihe ha ga-eme anyị niile! Ha tinyere anyị ihe niile anyị nwere n’ụlọ ndị agha. Eji m ya mee ihe wee zoo ihe, pensụl, akwụkwọ, foto, eserese eserese nke nne m, ngwa ngwa, ọsọ ọsọ ... na akwa akwa ahụ. Ha debanyereghị anyị aha ruo n’echi ya, nke dị ụkọ. Na ịbịaru bụ na m ruo mgbe ntọhapụ, zoro ezo dị ka o kwere mee, n'okpuru armpits n'oge nnyocha nke ogige… ”. Ihe osise a zọpụtara ndụ ya, ọ na-ekwughachi ya. Obi ụtọ ya maka ịse na ịbịnye ya na obere nnụnụ, ihe nnọchianya nke ọchịchọ ya maka nnwere onwe, nwere mkpebi maka ịkpọ ya El Pajarito. Site na nlezianya ya, o jiri nwayọọ nwayọọ nweta ntụkwasị obi nke ndị isi ya, na-eme eserese nke ndị ibe ya na akwụkwọ ozi Kaadị ekeresimesi, ma na-enwetakwa akụkụ nri karịa maka eserese foto.
Ruo ihe dị ka ọnwa ise ọ rụrụ ọrụ ruo ókè ike ya na iwu Strassenbau, raara nye iwu ụzọ Mauthausen. Agụụ, ọrụ na oyi, oyi na-atụ, n'oge oyi. Na mberede, na May 1941, ha kwuru na ya na baubüro, ọfịs ndị injinia na ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ ebe e mere atụmatụ maka owuwu nke ubi ahụ. Ha nyere ya ule, ọ gafere ya ebe ahụ ọ rụrụ ọrụ ruo ụbọchị ntọhapụ ya. “E nwere ndị ụlọ e sere ese, bụ́ ndị Poland, Czech, Yugoslavs, Belgium, ụfọdụ ndị France; ihe kapo Ọ bụ onye German, e nwekwara mmadụ anọ ndị Spen: Muñoz, onye omenkà na onye na-ese ihe na Valencian; Pérez, onye na-eto eto na-ese ihe na Madrid, na mmadụ abụọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ iwu ndị SS. Mgbe ụfọdụ ọbụna m hụrụ otu ezigbo onye Juu onye Juu na-ese ihe na Russia, Smolianoff, onye bụ onye na-ese ihe nke na-emepụta ego akwụkwọ bekee n'aha ndị Nazi ”. N'ọhịa ahụ ọ hụkwara Otto Peltzer, onye egwuregwu German nke meriri mita 800 na asọmpi egwuregwu Los Angeles na 1932. A tụrụ ya mkpọrọ na Mauthausen maka idina ụdị onwe na ịga megide echiche ndị Nazi.
N'oge na-adịghị anya ọ hụrụ ihe omume ọzọ nke ga-awụ ya akpata oyi na nke ọ ga-atụgharị uche n'otu n'ime ihe osise mara mma na agba ya. Na ebe a na-agbari okwute, ụfọdụ Ndị Juu Dutch na-arịgo steepụ 186 na-ebuli ihe ndina na ndị ha na ha nwụrụ anwụ na ndị ọbara. "Ahụrụ m ndị otu ndị mkpọrọ ahụ m dọtara na-ebugharị ndị ha nwụrụ anwụ na-agbatị aka ha na akwa mgbago nke nwere ọbara site n'aka ndị ọzọ nwụrụ." Ọ na-ekwu ya mgbe ọ na-egosi ihe osise ya Dị n'otu, nke ọ na-egosipụta enyemaka nke onye a na-atụgharị uwe na uwe mpempe akwụkwọ nye onye mkpọrọ ọzọ na-enweghị ike iguzo. Ndị Spanish Federation of Deported and Political Internees (FEDIP), nke e kere na 1945 wee gbazee ihe dịka afọ 2000, bịara stampụ eserese a n'ụdị stampụ nzipu ozi.
Mgbe ntọhapụ, Ortell biri na Bordeaux; Ọ pụghị ịrara onwe ya nye ọkachamara na ịse ihe, mana ejiri ụfọdụ mee ihe atụ. O zutere nwunye ya, Natividad Eguiluz, onye ọ lụrụ na 1949 ma mụọ ụmụ. Tupu o mechie akwụkwọ edemede ya, Ortells na-ese ihe osise ikpeazụ, nke o mere n'onwe ya na Bordeaux. Nọdụ n’elu mbe ka a na-ebu ya, ọ na-eso akụ́ nke na-egosi ụzọ e si aga Spen. Laughing na-akọwa, sị: “N’ezie, A dọtara m onwe m otu a, dị ka onye na-adịghị ọsọ ịlaghachi, n’ọsọ nke eju".
Isi mmalite - elpais.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ondense Manuel Alfonso Ortells, ebe nchekwa nke Mauthausen
Ọdịdị nke Dutch nke oge a
Ileta Gris n'oge oyi
Họrọ ebe njedebe Albacete Alemania Amsterdam Andorra Argentina Atenas Australia Austria Avila Badajoz Badalona Barcelona Benidorm Brasil Burgos Cádiz Canada Islands Canary Caribbean Castellon China Ciudad Real Colombia Córdoba Corea Croacia Cuba Cuenca Denmark USA Egypt Elche España Philippines Francia Gijón Granada Greece Guadalajara Holland Hong Kong Huelva Hungary Ibiza India England Ireland Italia Japan Sherry León Lisboa London Madrid Mallorca Marbella Morocco Menorca Merida Mexico Miami Milan Murcia Norway New York Kpee ekpere ndị ọzọ Oviedo Paris Peru Portugal Prague Dominican Republic Rome Rusia Salamanca Suecia Switzerland Tenerife Toledo Uruguay Venezuela Vitoria
Họrọ ebe njedebe
Soro Absolut Viajes n'efu ma nata akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara njem na njem na email gị.
Idenye aha ala
Ndị na-akpọsa ngwa ahịa